Kwiinkcubeko ezininzi, ubulumko bokuba izilwanyana zikwazi ukufumana imimoya okanye ukuqikelela ikusasa, nokuba zizithunywa zokufa . Kwaye omnye umfazi kunye nonina, ithuba lokuhlangana kunye nentlunkulu laliwuphawu lokuba into eyikrakra yayiza kwenzeka. Nangona "uMolly" enqwenela ukuhlala engaziwa, unethemba lokuthi umxholo wakhe usebenza njengengqungquthela yokulumkisa ukuba intlunkulu ingabathunywa bokufa.
Kwiminyaka engaphezu kwe-30, uMolly uhlala ekhoyika ukubona iintlunkulu.
Njalo xa enza, umntu osondeleyo naye uyafa. Ibali lakhe liqala xa wayeneminyaka eli-8 ubudala, ehleli ekhishini kunye nonina, ekhangele ngefasitela egcekeni. Njengoko bajonge ngaphandle, intlunkulu yaya kwi window.
Into engaqhelekanga kukuba, le ntaka yayibonisana nomama, "kusho uMolly, ekhumbula le siganeko. Umama wathi ngelizwi elinoyikiyo, 'Hayi, nceda uhambe!' wabuya ewindow. "
Njengoko unina wayesaba, le ntaka yahamba. Emva kokuba edibene, unina kaMolly wamxelela into engaqhelekanga.
"Xa ndandineminyaka yobudala bakho, umkhulu wakho kunye nathi sasihleli njengathi ngoku kwaye intlunkulu yaya kwifasitela," kusho uMama kaMolly. "Kwakubonakala ngathi, kwaye ugogo wakho wathi, 'Hayi yam. Siza kufa kwintsapho kungekudala'."
Kuba ugogo kaMolly, owayefudukela eNorway, isiganeko esingaqhelekanga sasingummangaliso. Ngokomntu waseNorway, uMolly uthe, ukudibana okunjalo nentlunkulu kubonwa njengobunzima bokufa xa intaka idibana nawe.
Yintoni eyenza yonke i-eerier, unina kaMolly wamxelela, kukuba unina wayefa nje emva kweeveki ezimbini emva kokubona le ntaka.
"Ndiyazi ukuba le nto injengeenkolelo ezingenangqondo, kodwa kwiminyaka engama-30 idlulileyo, rhoqo xa intlunkulu isenza oku, kwiiveki ezimbini umntu osondele kum," kusho uMolly. "Intaka iya kwenza konke okufunekayo ukuze uqaphele, uze ubaleke."
UMolly wazibonela okokuthi ukudibana nentlunkulu kunokubonisa xa wayeseneminyaka engama-20 ubudala. "Intsapho yam ndiye ndahlambulula isiseko seyise. Babenomphunga ephukile apho kwaye babesanda kubeka iplastiki enzima phezu kwefestile de kube yinto yokuyithatha indawo," esho. "Njengoko sasihlambulula, intombazana yam yathi, 'Yintoni le ntaka ephosa?' "U
UMolly waphawula ngefestile. Kwi-sill, intlunkulu yayigxuma ngokukhawuleza kwiplastiki. Njengoko inkwenkwe yakhe yaxubha ngentaka, yajika yajika yajonga ngqo kuye. Emva koko, yahamba.
"Yayinye intaka engesabi," u-Molly uyakhumbula umfana wakhe. "Ndimxelele ukuba kwakuyi-omen nokuba umntu uya kufa, kodwa wandideka."
Iveki kunye nesiqingatha kamva, umalume wakhe kaMolly wafa ngokungalindelekanga.
Ukuhlangana okulandelayo kukaMolly kwenzeka ngo-2008. Ngexa wayehlamba izitya ekhitshini, uMolly wabukela phezulu ukuze abone intlunkulu ewindow. Yayibonisana naye kwimizuzwana embalwa ngaphambi kokuba igxotha.
"Ngaloo ntambama, abantwana bam bebetlala ngaphandle kwaye beza beqhaqhayisa endlwini baze baqhayisa umnyango. Intombazana yam enye yathi, 'Mama, kukho iintaka ezizigidi ephahleni!'," Ukhumbula uMolly. "Yilapho ndingabava nje nje nge-squawking.
Abantu behamba ngeenja zabo kunye nokwenza umsebenzi weeyadi bonke bayeke kwaye bajonge nje kwindlu yam. "
Kwiintsuku ezilishumi kamva, unina kaMolly wafa.
Ukuhlangana kukaMolly kwakutshanje kwenzeka ngexesha lokuwa kuka-2017 xa wavuswa ngomsindo wezinja zakhe ezine ezigubungela emnyango wesilayidi. Ngakolunye uhlangothi lweglasi, intlunkulu ihamba, ikhangele ngaphakathi. Emva kokuqhawula izinja, uMolly wathatha ukhangele.
Wathi, "Ndiyichitha phantsi ndajonga ngqo entlunkulu," watsho. "Ndandizibuza ukuba ngaba uyagula, wenzakaliswa? Hayi, wayemi omeleleyo, amehlo ecacileyo, ekhangela nje kum. umnyango malunga nemizuzu emithathu aze ahambe. "
Kwiintsuku ezine kamva, uMolly wayesebenza ngaphandle xa ummelwane wakhe efika ukutyelela. Unina, ummelwane watshela uMolly, wayesele efile ngosuku oludlulileyo.
"Andiyi kukholwa. Ndiyazi ukuba abanye abantu kufuneka bacinge ukuba yinto engafanelekanga, kodwa ngokunyanisekileyo, maxesha amaninzi kunokuba ngengozi?"
U-Molly uthi akasabe esaba nodibana nentlunkulu. Uyenze uxolo kunye neengcamango zeentaka ezinjengobungozi bokufa, uthi, kwaye uyamkela ukuba inyaniso yinto ethile inyaniso nangona ayinakuqinisekiswa ngokwesayensi.
Uthi: "Ndiyazi into endiyenze ngayo.
I-Walpurgis Night - I-Halloween enye
Ixhaswe yiQumrhu eliMnyama
Iimpawu ezi-6 zoVocal ezidibanisa iiRejista
Ukuvukela kweBhokisi yeShayina ka-1900
Amherst GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Masenze uKhenketho - 1 - Ingxoxo kunye neNgxabano Isifundo kwiiKlasi eziPhambili zeNqanaba
Imiyalelo yokuThuthukiswa kwemiyalelo yeNewton
Kwiliphi Ubudala Ngaba Umntwana Wami Kufanele Aqalise Iiklasi zeBallet?
Ukunyuka kweMali kunye nokuHlalisana kweLizwe loRhwebi
Indlela uGustaf Kossinna wayifaka ngayo ubukhosi baseNazi baseYurophu
Iifayile zamaNazi ezizigidi ezili-17,5 zavezwa emva kweminyaka engama-60